काम गर्न जाने कम्पनीको बारेमा थाहा पाउन के गर्नु पर्छ ?
Mon, Aug 10, 2020 | 10:18:46 NST
प्रश्न : म रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदै छु । मलाई काम गर्न जाने कम्पनीका बारेमा थाहा पाउन मन लागेको छ । त्यसका लागि मैले के गर्नु पर्ला ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – हरेक रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई डिमान्ड बुक पठाएको हुन्छ । त्यसमा कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी, जस्तै : कम्पनीको उत्पादनहरु, कार्यस्थल, खाने बस्ने ठाँउ लगायत फोटो सहित पठाइएकाे हुन्छ । अथवा कम्पनीको वेव साइट मागेर आफैले वा साथीको सहयोग लिएर कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ ।